Sagaal Ciyaartoy Oo Chelsea Ah Oo Ay Burnley Ceeb Ku Baday Stamfrod Bridge, Antonio Conte Oo Musiibo Ku Bilawday Difaacashada Premier Leaque Xili Gary Cahill Iyo Fabregas Kaadhka Cas Loo Taagay. – WWW.Gool24.net
Sagaal Ciyaartoy Oo Chelsea Ah Oo Ay Burnley Ceeb Ku Baday Stamfrod Bridge, Antonio Conte Oo Musiibo Ku Bilawday Difaacashada Premier Leaque Xili Gary Cahill Iyo Fabregas Kaadhka Cas Loo Taagay.
Chelsea ayaa guuldaro fool ku bilaabtay xili ciyaareedka cusub ee Premier Leaque iyo koobka ay difaacanayso kadib markii Antonio Conte iyo kooxdiisu ay guuldaro lama filaan ahi ka soo gaadhay kooxda Burnley. Chelsea ayaa qaybtii hore ee kulankan kaadhka cas looga taagay kabtankeeda cusub ee Gary Cahill taas oo kooxda Burnley siisay in ay saddex gool oo bilaa jawaab ah ay qaybtii hore ee kulankan ay Stamford Bridge ugu raaxaysanaysay.
Laakiin sidoo kale qaybtii danbe ee kulankan markii ay dhamaadka ahayd waxaa isna kaadhka cas loo taagay Fabregas oo laba kaadh digniin ah qaatay, Blues ayaa ku dhawaatay in ay ka soo kabsato saddexdii gool ee qaybtii hore ee ciyaarta looga hormaray iyada oo Alvaro Morata iyo David Luiz ay laba gool rajeedeeda ku soo noolyeen laakiin Burnley ayaa awooday in ay saddexda dhibcood kala baxdo Stamford Bridge.
DAQIIQADII 13 aad ayay ciyaartu waji cusub yeelatay markii Gary Cahill kaadhka cas oo toos ah loo taagay isaga oo qalad xun ku galay Steven Defour laakiin Burnley oo fursada nin dheerida ah ka faa’iidaysanaysa ayaa goolkeeda furitaanka heshay daqiiqadii 24 aad waxaana goolkan u saxiixay Sam Voakes kaas oo cawin ka helay M. Lowton waxayna ciyaartu noqotay 1-0 ay Burnley hogaanka ciyaarta kula wareegtay.
DAQIIQADII 39 aad Burnley ayaa heshay goolkeeda labaad ee ay dhibaatada ugu sii abuurtay Chelsea kadib markii uu Ward goolkan ku dhaliyay kubbad caawin uu ka helay Cork waxayan ciyaartu noqotay 2-0 ay Burnley hogaanka kaga dheeraysatay kooxda koobka Premier leaque difaacanaysa ee Chelsea.
Waxaa goolasha Burnley ee qaybtii hore soo gabagabeeyay Sam Voakes kaas oo goolkiisa labaad dhaliyay daqiiqadii 43 aad si uu Burnley waqtigii nasashada ugu diro iyaga oo 3-0 hogaanka ciyaarta kaga haya kooxda koobka Premier Leaque ku soo guulaysaty balse dhibaatada culus ku bilaabtay ee Chelsea.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay kooxda Antonio Conte dadaal wayn samaysay sidii ay ciyaarta ugu soo laaban lahayd waxaana daqiiqadii 69 aad rajada Blues ee soo laabasho bilaabay Álvaro Morata kaas oo goolkan ku dhaliyay kubbad caawin uu Willian ka helay wuxuuna sidaa ku dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay ee Premier Leaque isaga oo ciyaarta ka dhigay 3-1 ay wali Burnley hogaanka ciyaarta ku hayso.
DAQIIQADII 81 aad xaalada Chelsea ayaa musiibo kale isku sii badashay kadib markii Fabregas oo kaadhka digniinta ah hore u haystay loo taagay kaadhka laabad ee diginta ah waxaana loo raaciyay kaadhka cas kadib markii uu qalad ku galay Cork.
DAQIIQADII 88 aad ee dhamaadkii ciyaarta Chelsea ayaan wali isdhiibin waxaana goolkeeda labaad ee rajadeeda soo yara nooleeyay dhaliyay David Luiz kaas ciyaarta ka dhigay 3-2 ay wali Burnley hogaamiyaasha ciyaarta ku yihiin laakiin soo laabashada Chelsea ayaan dhamaystirmin waxayna ciyaartu ku dhamaatay 3-2 ay Burnley guuldaro ku baday kooxda koobka Premier leaque difaacanaysa ee Chelsea oo garoonkeeda joogtay.